The Ab Presents Nepal » डिएसपीको नागरिकता नै नक्कली ?
डिएसपीको नागरिकता नै नक्कली ?
नागरिकतामा कीर्ते गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी वृत बौद्धका डीएसपी रमेशबहादुर सिंहमाथि छानबिन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि विस्तृत छानबिन थालेको हो ।उनलाई बयानका लागि उपस्थित गराउन महानगरीय प्रहरी कार्यलय रानीपोखरीमा पत्राचार भएको छ । रानीपोखरीले उनलाई उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ ।
सिंह इन्सपेक्टर हुँदा घुससहित ललितपुबाट पक्राउ परेका थिए । उनले सो विषयमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि डिएसपीमा बढुवा भई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् । नागरिकतामा उमेर सच्चाएको आरोपमा हाल छानबिन भएको हो ।